🥇 ▷ Samsung Galaxy Note 10 Maxay qaali u tahay? ✅
Samsung Galaxy Note 10 Maxay qaali u tahay?
Samsung Galaxy Note 10 iyo Note 10 Plus baaritaan Faahfaahinta aaladda la socoto waan wadaagnay. Faahfaahinta iyo qaabeynta taleefanka gacanta lagu soo qaatay, in kasta oo dood aad u weyn ay ka taagan tahay qiimaha Turkiga.
Annaga noo ah fiidiyowgan, Istaraatiijiyadda Qaybta Samsung Mobile Turkey iyo Suuqgeynta, ayaa sheegay in calanka cusub ee Öztek Galaxy Note 10 iyo Galaxy Waxaan ka wada hadalnay sababta 10 Plus ay qaali u tahay.
Koofurta tikniyoolajiyadda Kuuriyada Koonfureed Samsung7dii Ogosto, Dalka Mareykanka waxaa lagu qabtay xaflad ka dhacdey magaalada New York, xubnaha qoyska ee Galaxy Note Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 PlusC.
Mid ka mid ah moodooyinka calanka ugu weyn ee sannadka Galaxy Note 10, illaa inta laga wada hadlay qiimaha guryaha. Sidii aan horey kuugu sheegay, Galaxy Note 10 9.899 TL, Galaxy Note 10 Plus waa $ 11,399 qiimaha sumadda ayaa laga heli doonaa dalkeenna.
Hagaag, Galaxy Note 10 Turkey qiimaha Maxay qaali u tahay? Anigoo ah Tamindir.com, waxaan fursad u heysanaa inaan dib kuugu eegno goobta adiga Galaxy Galaxy Waxaan lahadalnay 10ka taxane ee Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada Samsung Mobile Turkey iyo Suuqgeynta ayaa yiri Öztekin.
Öztekin wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah oo midba midka kale ka mid ah, Galaxy Note 10 ayaa qiimeeyay qiimaha badan ee looga hadlay Turkiga.
Istaraatiijiyada Istaraatiijiyada Istiraatiijiyada Turkiga iyo Suuqgeynta Turkiga ayaa sheegay in wareysigii buuxa ee aan la sameynay Öztekin ay ka daawan karaan muuqaalka hoose.